NC ရဲ့ bounty ! (@aggamun) — Steemit
NC ရဲ့ bounty ! (@aggamun)
aggamun (62) in esteem-myanmar •2months ago
NC ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။ bounty ဆိုပြီးတော့ story ending လေး ရေးခိုင်းပါတယ်။ transporter lll နဲ့ stardust ပေးမယ်တဲ့လေ။ T3 ကို ကျွန်တော် မကြိုက်ပါ။ Explorer ll ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒိုင်ဗင် ပစ် နေမိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အခု T3 ဆိုတော့ သဘောမကျတော့ စိတ်ပါ လက်ပါ မရှိ ဖြစ်နေပါတယ်။
stardust လေးက တော့ လိုချင်မိပါတယ်။ ဘယ်နေရာ သုံးရမှန်း သေသေချာချာ မသိပေမယ့် trade လို့ရတယ် ဆိုတာနဲ့ ပဲ သဘောကျပါတယ်။ ခက်တာက story ending က E လို ဆိုပြန်တော့ ပိုဆိုးကုန်တာပေါ့။ နောက် bounty တွေကျမှပဲ နေရာ လုတော့မယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခါတော့ လွှတ်လိုက်တော့မယ် ရှိစေတော့။
NC က အဲလိုပဲ bounty တွေ လုပ်ပြီး ship တွေ ရဲ့ blueprint တွေ ပေးဖို့ ရှိတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ လေဆာ ပါတဲ့ ယာဉ် တွေ ပေးရင်တော့ မရ ရရ အတင်း ဝင်ယူရမှာပဲ။ တိုက်ခိုက်စွမ်းအား မြင့်တဲ့ ယာဉ် ကသာ တကယ့် တိုက်ပွဲမှာ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်တာ မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်တော်က ခုထိ ဘယ် blueprint မှ ဝယ်ပြီး ship မထုတ်ထားပါဘူး။ ရှိတဲ့ ယာဉ် ကိုသာ ရသမျှ သိမ်းကြုံး ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ အစီးရေ ထောင်ကျော်လာရင် ရောင်းဖို့တောင် စဉ်းစားထားတာ ခုတိုင်းဆို ဝယ်မယ့်သူတောင် ရှိပါ့မလားပဲ။
esteem-myanmar esteem nextcolony palnet steemleo
mmunited (66) ·2months ago
ကျွန်တော်တော့ ရေးလိုက်ဉီးမယ် ဘရို
ဟုတ်ကဲ့ ဘဒို။ good luck! :)